विश्वमा कोरोना अपडेट : कुन देशमा कस्तो छ महामारीको पछिल्लो अवस्था ? – Sanchar Patrika
काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्वका लागि ठूलो चुनौति बनेको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वमा यो समाचार तयार पार्दासम्म ५ लाख ९९ हजार ३३९ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने १ करोड ४१ लाख ८९ हजार २० जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यस्तै ८४ लाख ५५ हजार १६५ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने विश्वमा ६० हजार १४२ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
विश्वका २१३ वटा देशहरुमा आफ्नो प्रकोप फैलाईसकेको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अमेरिकामा १ लाख ४२ हजार ६४ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने ३७ लाख ७० हजार १२ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यहाँ १७ लाख ४१ हजार २३३ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने १६ हजार ६६० जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै ब्राजिलमा अहिलेसम्म २० लाख ४८ हजार ६९७ जनालाई संक्रमण भएको छ भने ७७ हजार ९३२ जनाको मृत्यु भएको छ ।
त्यस्तै ब्राजिलमा १३ लाख ६६ हजार ७७५ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने ८ हजार ३१८ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै भारतमा अहिलेसम्म २६ हजार २८५ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने १० लाख ४० हजार ४५७ जनालाई संक्रमण भएको छ । त्यस्तै ६ लाख ५४ हजार ७८ जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने ८ हजार ९४४ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै रुसमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म १२ हजार १२३ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने ७ लाख ५९ हजार २०३ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यहाँ ५ लाख ३९ हजार ३७३ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने २ हजार ३०० जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै पेरुमा अहिलेसम्म १२ हजार ७९९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ लाख ४५ हजार ५३७ जनालाई संक्रमण भएको छ । त्यहाँ २ लाख ३३ हजार ९८२ जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने १ हजार ३१४ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै चिलीमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट ८ हजार ३४७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ लाख २६ हजार ५३९ जनालाई संक्रमण भएको छ । त्यस्तै २ लाख ९६ हजार ८१४ जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने १ हजार ७९६ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै स्पेनमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण २८ हजार ४२० जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने ३ लाख ७ हजार ३३५ जनालाई संक्रमण भएको छ । त्यहाँ ६१७ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै बेलायतमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म ४५ हजार २३३ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने २ लाख ९३ हजार २३९ जनालाई संक्रमण भएको छ । त्यहाँ १४२ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै मेक्सिकोमा अहिलेसम्म ३८ हजार ३१० जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ लाख ३१ हजार २९८ जनालाई संक्रमण भएको छ । त्यस्तै २ लाख ८ हजार ४३६ जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने ३७८ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ । त्यहाँ पछिल्लो २४ घण्टामा ७३६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७ हजार २५७ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
त्यस्तै ईरानमा अहिलेसम्म १३ हजार ७९१ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ लाख ६९ हजार ४४० जनालाई संक्रमण भएको छ । त्यस्तै २ लाख ३२ हजार ८७३ जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने ३ हजार ५०९ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै इटालीमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म ३५ हजार २८ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने २ लाख ४३ हजार ९६७ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यहाँ १ लाख ९६ हजार ४८३ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने ५० जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै पाकिस्तानमा अहिलेसम्म ५ हजार ४७५ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ लाख ५९ हजार ९९९ जनालाई संक्रमण भएको छ । त्यहाँ १ लाख ८३ हजार ७३७ जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने १ हजार ८९५ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
बितेको २४ घण्टामा विश्वमा ८०२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ९ हजार २६८ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
Prevसाउन ३ गते शनिबार घट्याे विदेशी विनिमय दर, हेर्नुहाेस् कुन देशको कति ?
Nextबि’रामीको सेवा गर्न डा. गोबिन्द केसी कालिकोटमा !
पुरुषहरु महिलाका यीबानीले गर्दाभुतुक्कै हुनेग र्छन
यस्ता छन् मानव शरीरबारे केही रोचक प्रसङ्ग